यी दाजुभाइ जसले १५० भन्दा धेरै ला’श चि’हानबाट नि’कालेर खा’ए – " सुलभ खबर "
यी दाजुभाइ जसले १५० भन्दा धेरै ला’श चि’हानबाट नि’कालेर खा’ए
काठमाडौं १ माघ- मानिसले मानिसकै मा’सु खा’एका घ’टनाबारे सुन्दा हाम्रो आङ नै जिरिङ्ग हुन्छ । पाकिस्तानमा यस्तै दाजुभाइ छन् जसले चिहा’नबाट निका’लेर १५० भन्दा धेरै ला’श खा’एका छन् । यी दाजुभाइको नाम मोहम्मद फरमान अली र मोहम्मद आरिफ अली हो । पाकिस्तानको पंजाब प्रान्तको भक्कर जिल्लाका यी दाजुभाइ विवाहित हुन् तर उनीहरुका पत्नी उनीहरुलाई छो’डेर गइसकेका छन् । पत्नीहरुले यी दाजुभाइमाथि कु’टपि’ट र गा’लीगलौ’जको आ’रोप लगाएर छो’डेर गएका थिए ।
यी दाजुभाइलाई २०११ पहिलो पटक उनीहरुको घर नजिकैको चि’हानघा’टबाट एक महिलाको श’व हरा’एपछि प’क्राउ गरिएको थियो । २४ वर्षमै मृ’त्यु भएकी ती महिलाको नाम सायरा परवीन थियो र उनको मृ’त्यु क्या’न्सरका कारण भएको थियो । सायराका परिवारले उनलाई चिहा’नमा गा’डेर घर गएका तिए । भोलिपल्ट आएर हेर्दा चि’हान खनिएको थियो र सायराको श’व ह’राएको थियो । त्यसपछि उनीहरुले पुलिसमा उ’जुरी गरे ।
छानबिनका क्रममा पुलिसले सायराको श’व ह’राउनुमा फरमान अली र आरिफ अलीको संलग्नता भएको पायो । त्यसपछि पुलिस उनीहरुको घरमा पुग्दा घरमा एउटा भाँडोमा करीजतै केही चिज प’काएर राखिएको थियो । पुलिसले घरमा सबैतिर खोजतला’स गर्दा घरबाहिर एक बोरामा सायराको ला’श भेटियो । लाशका अं’ग का’टिएका थिए । त्यसपछि पुलिसले दुवै दाजुभाइलाई हिरासतमा लिएर पकाइएको चीज जाँचको लागि पठायो जहाँ त्यो चिज मान्छेको मासु भएको थाहा भयो ।
पुलिसले जब यी दाजुभाइसँग सोधपुछ गर्यो त्यसपछि निकै आश्चर्यजनक कुराको खुलासा भयो । दाजुभाइले पुलिसलाई बताएअनुसार उनीहरु चिहा’नमा भर्खरै गा’डिएका ला’श निका’ल्थे र घर लिएर आउँथे । त्यसपछि त्यसको क’री बनाएर खा’न्थे । उनीहरुले त्यतिबेलासम्म सय भन्दा धेरै ला’श खा’इसकेको बताएका थिए । यो कुरा उनीहरुले अप्रिल २०११ मा प’क्राउ परेपछि बताएका थिए । त्यसपछि ती दुवै नरभक्षी दाजुभाइलाई अदालतमा पेश गरियो । तर त्यहाँ एउटा समस्या आयो किनकि पाकिस्तानको कानुनमा यस किसिमका आरो’पीलाई के स’जाय दिने भन्ने प्रावधान नै थिएन ।
स्पष्ट कानुन नभएपछि उनीहरुलाई चिहानलाई क्षति पुर्याएको र अन्य धारामा मु’द्दा चलाइयो । अदालतले दुवैलाई २–२ वर्षको जेल सजा’य र ५०–५० हजार रुपैयाँ जरि’वानाको स’जाय सुनायो । दुवैलाई मि’यांवाली जे’लमा राखियो । यद्यपि उनीहरु जेलमा कम अस्पतालमा धेरै बस्थे किनकि उनीहरुको मानसिक स्वाथ्यको उपचार भइरहेको थियो । जब उनीहरुको स’जाय पूरा भयो त्यपछि मे २०१३ मा उनीहरुलाई जेलबाट रि’हा गरियो । त्यसपछि दुवै दाजुभाइ आफ्नो गाउँ पुगे तर त्यहाँका स्थानीयले यी दाजुभाइको रिहाइको विरो’ध गर्न थाले ।
स्थानीयलाई यी दाजुभाइले आफूहरुलाई मा’र्ने हुन् कि भन्ने ड’र थियो । अप्रिल २०१४ मा स्थानीयले ती दाजुभाइको घरबाट सडेको मा’सुको ग’न्ध आइरहेको भन्दै पुलिसमा उ’जु’री गरे । त्यसपछि पुलिसले उनीहरुको घरमा छा’पा मा’र्दा उनीहरुको घरको एक कोठामा एक बालकको टा’उको भे’टियो जसलाई मृ’त्युपछि चिहा’नमा गा’डिएको थियो । त्यहाँ एउटा भाँडोमा मान्छेको मासुको क’री पनि थियो । यो दृश्य त्यस्तै थियो जस्तो २०११ मा पुलिसले छा’पा मा’र्दा देखिएको थियो ।
पुलिसले उनीहरु दुवैलाई गिर’फ्तार गर्यो र फेरि अदालतमा पेश गरियो । अब अदालतको अगाडि फेरि पनि त्यही समस्या थियो कि यस्ता आरो’पीलाई के स’जाय दिने ? किनकि यस विषयमा कानुनमा कुनै प्रावधान नै थिएन । यो मु’द्दालाई पंजाबको सरगोधामा आ’तंक’वाद निरो’धक अस्पताललाई सुम्पिइयो । अदालतले यी दाजुभाइलाई बच्चाको चि’हानलाई नो’क्सानी पुर्याएको, आ’तंक फैलाएको र सम्पत्ति क्षति पुर्याएको आरो’पमा दोषी ठहर गर्दै १२–१२ वर्षको स’जाय सुनायो । अहिले दुवै नर’भक्षी दाजुभाइ जेलमा छन् ।
काठमाडौं । मानिसहरुलाई निन्द्रा लाग्नु र थकाइका कारण झुल्नु स्वभाविक कुरा हो । तर गाउँका
बेडरूममा गरिने यस्ता गल्ती बन्न सक्छन् पति-पत्नीबीच मनमुटावको कारण !
एजेन्सी, वास्तुशास्त्रमा शयन कक्ष अर्थात् सुत्ने कोठाको निकै महत्व रहेको बताईएको छ । त्यसैले शयन
यी दिदि बहिनीको बारेमा यस्तो रहस्य खुल्यो थाहा पाउँदा जो कोहि बन्छ चकित !
घटना दक्षिण अफ्रिकाको हो । बाल्यकालमा नै छुटिएका दुई दिदीबहिनीको १७ वर्ष पछि सेल्फीले भेट
बिबाह भएको पुरुषसँग किन आकर्षित हुन्छन युवतीहरु ? यस्ता छन कारणहरु !
काठमाण्डौ । भनिन्छ श्रीमान श्रीमतीको झगडा परालको आगो हो भनेर । तर नवीन र उनकी
सुत्ने कोठा नितान्त व्यक्तिगत स्थान हो जहाँ सम्पूर्ण आराम प्राप्त हुन्छ ।मानिसहरू जब बेडरुममा पुग्छन्